John Kery iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo ku wada hadlay Addis Ababa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Xoghayaha Arrimaha dibada Mareykanka John Kerry, iyadoo kulan albaabada u xiran oo warbaahinta dibada ka joogtay ay wada qaateen.
Kulankan ayaa labada mas’uul uga hadleen xiriirka labada dal, arrimaha ammaanka, siyaasada iyo sidii Mareykanka ay u sii wadi laheyd taageerida dowladda Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada qalabka sida.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga warbixiyay John Kerry xaalada Soomaaliya, howl galada ka socda dalka ee Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
John Kerry ayaa sheegay inay taageerayaan howl galka ka socda Soomaaliya, waxaana uu balan qaaday in Mareykanka uu gacan ka siinayo howl galkaas Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda la dagaalanka Al-Shabaab.
Xoghayaha Arrimaha dibada Mareykanka ayaa booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo Africa ah, waxaana labadii maalmood ee uu joogay Addis Ababa uu la kulmay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Madaxda Midowga Afrika iyo mas’uuliyiin kale.
Mareykanka ayaa xooga saaraya xiriirka qaarada Afrika ee dhinaca Ganacsiga, iyadoo tartan xoogan loogu jiro qeyraadka Afrika oo dalal badan oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Japan iyo Turkiga ay safka hore ugu jiraan sidii ay uga faa’ideysan lahaayeen kheyraadka Afrika.
Xoghayihii hore ee Maamulka Gobolka Banaadir C/kaafi Hilowle Cismaan oo ku geeriyooday Qarax